Isimboli.ai: Iqonga lomphuhlisi lobukrelekrele bencoko | Martech Zone
Eyona nto ibaluleke kakhulu kwishishini ziincoko zalo- zombini iincoko zangaphakathi phakathi kwabasebenzi kunye nengeniso yangaphandle evelisa incoko nabathengi. Uphawu luluhlu olubanzi lwee-API ezihlalutya incoko yendalo yabantu. Inika abaphuhlisi amandla okwandisa oku kunxibelelana kunye nokwakha amava omthengi angaqhelekanga nakweliphi na ijelo-nokuba lilizwi, ividiyo okanye umbhalo.
Uphawu yakhelwe kubuchwephesha beNgcaciso yoMxholo (i-C2I) yetekhnoloji, evumela abaphuhlisi ukuba bakwazi ukudibanisa ngokukhawuleza ubukrelekrele obunobunkunkqele obugqitha ekusetyenzisweni kolwimi lwendalo (NLP) nakwincoko yokubhaliweyo. Ngophawu, abaphuhlisi banokuzenzela uhlalutyo lomxholo wencoko yendalo ngaphandle koqeqesho / amagama okuvuka kwaye banokubonelela ngezihloko zesishwankathelo sexesha lokwenyani, izinto zokwenza, ukulandelela, izimvo kunye nemibuzo.
I-API yeMpawu isinika ukusebenza okwahlukileyo kakhulu ukwakha amava omhlangano omangalisayo kubathengi bethu. Siyavuya ukunika abasebenzisi bethu ulwazi lweentlanganiso oluzenzekelayo kunye nezinto ezenziwayo kwimveliso yethu ye-Intermedia AnyMeeting® kwaye sijonge phambili kumava engxoxo ahlukeneyo esiza kuwaxhobisa kwikamva.
ICostin Tuculescu, i-VP yokuBambisana e Ephakathi, unxibelelwano olumanyeneyo olukhokelayo kunye nomnikezeli wesicelo sefu
Iqonga liphume kwibhokisi enee-widgets ze-UI, i-SDK ephathekayo, ukudityaniswa kweTwilio, kunye nokunxibelelana kwelizwi kwe-API yelizwi kwiifowuni kunye nokusetyenziswa kwewebhu.
Ngengxaki yangoku, izixhobo zobukrelekrele bokuncokola njengeSimboli zinokuba luncedo kakhulu, ekujonganeni nemiceli mngeni kwimveliso yomsebenzi ekude kuqoqosho lwehlabathi olwandayo. Ngokunyuka kwabasebenzi abakude, iqonga elinokucwangciswa elinokunceda abaphuhlisi ukuba bongeze kwaye bathumele uhlalutyo lwencoko ayimfuneko kuphela, kubalulekile.
Iimpawu zeMpawu zibandakanya:
Uhlalutyo lweNtetho -Ukuqondwa kwentetho ezenzekelayo, ukwahlula isithethi okuninzi, ukufunyanwa komda wezivakalisi, iziphumlisi, iimvakalelo.
Uhlalutyo lwamagama asetyenziswayo -Ukuqonda okufana nezinto zokwenza, ukulandelela, izimvo, imibuzo, izigqibo kunye nezihloko ezishwankathelweyo zencoko.
Iwijethi ze-UI ezenziwe ngokwezifiso -Iqonga lokuqala elinokucwangciswa ngokupheleleyo elinengxoxo kunye newijethi ze-UI ukwenza amava afakelweyo ngokwendalo kwizicelo.
Iidesbhodi zeXesha langempela -Umgangatho ophezulu wokujonga iincoko kubasebenzisi nakumashishini usebenzisa i-dashboard eyakhelwe-ngaphambili.
Ukudityaniswa kwezixhobo zomsebenzi Ukudityaniswa okwandisiweyo kusetyenziswa ii-webhooks kunye nokuphuma kwebhokisi ngokudityaniswa kwekhalenda, i-imeyile kunye nokunye.
Zonke iincoko zinolwazi olutyebileyo, olungalungiswanga, kunye nomxholo. Ngokulula, zinzima. Kude kube ngoku, ziiscoped kuphela ezixineneyo, ezokuhambisa ngesandla, kwaye zihlala zinempazamo ezifumanekayo kubaphuhlisi nakumashishini ukuze basike ngempumelelo le ngxolo. Ngoku, yonke into abayifunayo ukuba bahambe ngaphaya kwale mida ikhona.
Uphawu lweNgcaciso yoMzekelo woBukrelekrele:
Nanku umzekelo wokukhutshwa kwencoko phakathi kwabahambi ababini apho kubonelelwa ngezihloko zesishwankathelo, umbhalo, ukuqonda, kunye nokulandelwa okwenyani komhla nexesha.
Sayina iAkhawunti ePhawu
tags: c2iUmxholo wengxoxo yobukrelekreleaphumle apisdkUhlalutyo lwentethouphawuumnxebaUhlalutyo lwetekisiTwilioIlizwi apiweb hook
ILexio: Guqula idatha ibe kuLwimi lweNdalo